Bit By Bit - Ethics - 6.8 Mmechi
Nchọpụta mmadụ na afọ ole na ole na-ebuli nsogbu ndị metụtara ọrụ ọhụrụ. Mana nsogbu ndị a anaghị enwe ike imebi. Ọ bụrụ na anyị, dị ka obodo, nwere ike ịzụlite ụkpụrụ omume gbasara mmekọrịta na ụkpụrụ ndị na-akwado na ndị ọha na eze kwadoro, mgbe ahụ, anyị nwere ike ijikwa ike nke oge dijitalụ n'ụzọ ndị na-arụ ọrụ na ndị bara uru na ọha mmadụ. Isi nke a na-anọchite anya mgbalị m iji mee ka anyị gaa n'ụzọ ahụ, echekwara m na isi ihe ga-abụ maka ndị na-eme nchọpụta ịnakwere echiche ndị dabeere na ụkpụrụ, ma nọgide na-agbaso iwu kwesịrị ekwesị.
Na mpaghara 6.2, akọwapụtara m ihe atọ gbasara afọ-afọ na-eme nchọpụta. Mgbe ahụ, na mpaghara 6.3 M kọwara ihe m chere bụ isi ihe kpatara enweghị mgbagwoju anya na nchọpụta mmekọrịta mmadụ dị iche iche: ike n'ike n'ike maka ndị na-eme nchọpụta na-ahụ ma na-anwale ndị mmadụ n'enweghị nkwenye ma ọ bụ ọbụna ịma. Ike ndị a na-agbanwe ngwa ngwa karịa iwu, iwu, na iwu anyị. Ọzọ, na nkebi nke 6.4, akọwapụtara m ụkpụrụ anọ dị ugbu a nke pụrụ iduzi echiche gị: Ịkwanyere Ndị Mmadụ, Uru, Ikpe ziri ezi, na Ịkwanyere Iwu na Mmasị Ọha Mmadụ. Mgbe ahụ, na ngalaba 6.5, m chịkọtara okpukpu abụọ nwere ike ịchọta ọdịdị-njedebe na deontology-nke nwere ike inyere gị aka na otu n'ime nsogbu ndị kachasị ike ị ga - eche ihu: mgbe mgbe ọ ga - adịrị gị ka i jiri ụzọ dị ịtụnanya na - atụgharị uche iji nweta ihe kwesịrị ekwesị njedebe. Ụkpụrụ ndị a na ụkpụrụ omume ọma ga-eme ka ị nwee ike ịgafe karia ị na-elekwasị anya n'ihe iwu ndị dị ugbu a na-eme ka ị nwekwuo ikike ikwurịta okwu gị na ndị ọzọ na-eme nchọpụta na ọha na eze.
Na nhazi nke a, na ngalaba 6.6, atụlere m ebe anọ dịka ihe ịma aka maka ndị nchọpụta na-elekọta mmadụ dị afọ iri na ụma: nkwenye ezinyere (ngalaba 6.6.1), nghọta na ijikwa ihe ọmụma dị egwu (ngalaba 6.6.2), nzuzo (ngalaba 6.6.3 ), na ime mkpebi ndị ezi uche na-adịghị na ya n'ihi enweghị mgbagwoju anya (ngalaba 6.6.4). N'ikpeazụ, na ngalaba 6.7, ejiri m atọ ndụmọdụ bara uru maka ịrụ ọrụ na mpaghara nwere ụkpụrụ omume na-enweghị atụ.
Na okwu nke akporo, isiakwụkwọ a ka lekwasịrị anya n'ọnọdụ nke otu onye na-eme nchọpụta na-achọ generalizable ihe ọmụma. Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ na-esi dị mkpa banyere ndozi na usoro usoro ziri ezi nlekọta nke research; ajụjụ banyere ụkpụrụ nke mkpokọta na ojiji nke data site na ụlọ ọrụ ndị; na ajụjụ banyere uka surveillance site ọchịchị. Ndị ọzọ a ajụjụ doro anya na tara akpụ, ma ọ bụ m olileanya na ụfọdụ n'ime ndị echiche site research ụkpụrụ ọma ga-enye aka na a ndị ọzọ.